အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ချစ်သော ဧရာဝတီ
ဒီနေရာဟာ ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ တာပိန်မြစ်တို့ ဆုံတဲ့နေရာပါ။ ညာဘက်က မြစ်ငယ်လေးက တာပိန်မြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ အပြာရောင် တောင်တန်းကြီးနောက်ခံထားပြီး မြစ်နှစ်ခု ပေါင်းဆုံနေတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ သိပ်လှတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ကို ရောက်ချိန်မှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါဘဲ။ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းမဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ အလှကို လိုက်ကြည့်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားမိပြန်ပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားရောက်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ကျွန်မကို မြစ်ရှုခင်းကြည့်နိုင်မဲ့နေရာတစ်ချို့နဲ့ ဝိုင်းမော်စက်လှေဆိပ်ကို လိုက်ပို့ပါတယ်။ အောက်ကပုံတွေကတော့ မြစ်ကြီးနားမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားရောက်ချိန်ဟာ ညနေစောင်းဖြစ်တာရယ် ဖုန်းကင်မရာနဲ့သာ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာရယ်ကြောင့် ဓာတ်ပုံတွေက ဗန်းမော်မှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ မြစ်ရှုခင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုတော့ သိပ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်မတို့ ငယ်စဉ်က မြစ်ဆိပ်ကမ်းဟာ အမှိုက်သရိုက်ကင်းစင်ပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေခဲ့ပါတယ်။ ယခုချိန်မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ မြစ်ကမ်းစပ်ဟာ အမှိုက်တွေနဲ့ ရှုပ်ပွနေတာမို့အဲဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းတဲ့ ခံစားချက်၊ ဝမ်းနည်းမိတဲ့ ခံစားချက်တွေ ရင်ထဲကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားရော ဗန်းမော်မှာရော တူညီတာတစ်ခုက မြစ်ရေဟာ နောက်ကျိနေတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရာသီကာလကလွဲလို့ ယခင်ကဆိုရင် နွေနဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ မြစ်ရေဟာ စိမ်းလဲ့ ကြည်လင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံနဲ့ မေခမြစ်ဖျားတို့မှာ မြောက်မြားလှစွာသော ရွှေတူးဖော်လုပ်ကွက်များကြောင့် မြစ်ရေဟာ အချိန်တိုင်း နောက်ကျိနေခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ရေ နောက်ကျိခြင်း၊ မြစ်ဆိပ်ကမ်းတွေမှာ အမှိုက်သရိုက်များ၊ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်များနဲ့ ရှုပ်ပွနေခဲ့ရတာဟာ လူတွေရဲ့ ပယောဂကြောင့်သာ ဖြစ်ရတာပါ။
အမှိုက်တွေကြောင့် သဘာဝအလှကို ဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့ မြစ်ဧရာကမ်းခြေ
ဧရာဝတီမြစ်ဟာ လူတွေရဲ့ ပယောဂကြောင့် အမှိုက်သရိုက်တွေနဲ့ အလှပျက်နေရသလို လူတွေရဲ့ လောဘဇောကြောင့်လည်း မြစ်ရေဟာ နောက်ကျိနေရပါပြီ။ ဘယ်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကတော့ စီးဆင်းမြဲစီးဆင်းနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ကနေ မေခ မေလိခမြစ်နှစ်သွယ်ပေါင်းဆုံကာ စတင်စီးဆင်းလာတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ စတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြည်နယ်တိုင်း အသီးသီးကို နှလုံး သည်းပွတ်သဖွယ် အလည်ကောင်မှ စီးဆင်းကာ ဧရာဝတီတိုင်းအရောက်မှာ ပင်လယ်ထဲကိုစီးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူစီးဆင်းရာ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ မြို့ရွာ ကျေးလက် စတဲ့ ဒေသက လူတွေအတွက် အကျိုးများစွာ ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့သလို မြစ်ကြီးကို အမှီပြုလို့ နေထိုင်ကြသူတွေလည်း အဆင်ပြေခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မချစ်တဲ့ ဧရာတီမြစ်ကြီး ဘေးရန်ကင်းရှင်းစွာ လှပသာယာစွာ အမြဲတမ်း စီးဆင်းနိုင်စေဖို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ ထိပ်ဖျားကနေ တိုင်းပြည်အောက်အရပ်တိုင် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ပုံရိပ်ဟာ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုရဲ့ ပြယုဒ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းများစွာ၊ ခေတ်များစွာကို သယ်ပိုးရင်း တာဝန်ကျေစွာ စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်တစ်စင်းက ဖြစ်တည်ပေးတဲ့ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုကို ကျွန်မတို့ လူသားတွေက တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးကြရမှာပါ။ အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ မြစ်တစ်စင်းသာဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဟာ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ စည်းလုံးမှုနဲ့ လူသားတွေ ကောင်းကျိုးကို သယ်ပိုးကာ တာဝန်ကျေစွာ စီးဆင်းနေခဲ့တယ်ဆိုရင် အသိဥာဏ်ရင့်သန်သော သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကျွန်မတို့ လူသားတွေကရော မိမိနေထိုင်ရာ တိုင်းပြည်မြို့ရွာ၊ ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေများ သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးပါပြီလဲ။ စဉ်းစားစရာပါ။ လူသားတွေရဲ့ မာန ၊ အတ္တ၊ လောဘ၊ အငြိုး၊ အာဃာတ အမုန်းတရားများဟာ ဝန်းကျင်ရပ်ရွာရဲ့ အလှအပ ငြိမ်းအေးသာယာမှုတို့ကို ဖျက်ဆီးပစ်စေနိုင်တဲ့ အဖျက်တရားများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့တွေဟာ မာန်မာန၊ အတ္တ၊ လောဘ၊ ဒေါတတရားများကို လျော့ချလို့ မိမိနေထိုင်ရွာ မြို့ရွာအတွက် ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ အများအကျိုး မဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အမှိုက်လိုလူများ မဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားသင့်ကြတယ် မဟုတ်ပါလားရှင်။
26 Responses to “ချစ်သော ဧရာဝတီ”
ရာဇဝင်များရဲ့သတို့သမီး ကတော့ ကျက်သရေရှိဆဲပါပဲလေ..။ ချစ်သော ဧရာဝတီကို ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် ဘယ်ကကြည့်ကြည့် လှနေအောင် ကျွန်မတို့လူသားတွေ တာဝန်သိစွာ တန်ဖိုးထား ထန်းသိမ်းသွားကြရမှာပါ..။
ဧရာဝတီရဲ့အလှ ဓါတ်ပုံတွေအတွက် ကျေးဇူးပါချောရေ..
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးလိုပဲ.. မာနတွေ. အတ္တတွေ. လောဘတွေကို လျှော့ချပြီး မိမိကိုယ်ကို အမှိုက်တခုမဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားပါ့မယ်။
"ကျွန်မတို့တွေဟာ မာန်မာန၊ အတ္တ၊ လောဘ၊ ဒေါတတရားများကို လျော့ချလို့ မိမိနေထိုင်ရွာ မြို့ရွာအတွက် ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ အများအကျိုး မဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အမှိုက်လိုလူများ မဖြစ်အောင်တာ့ ကြိုးစားသင့်ကြတယ်"
110% agree on that proposition!!!
~~~ ဧရာဝတီ ... ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီး ... ငါတို့ရဲ့ဝိဉာဉ် ~~~
ချောတင်ထားတဲ့ ပုံတွေကိုကြည့်ရင်း သီချင်းလေး တိုးတိုးညည်းမိတယ်။
ခေတ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း စနစ်တွေ ဘယ်လိုဟောင်းဟောင်း ဧရာဝတီကတော့ စီးဆင်းနေအုံးမှာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ သူ့တန်ဖိုးကိုသိ၊ သူ့အလှကိုခံစားတတ်ပြီး အားလုံးက သူ့ကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြမှ ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီး ကျန်းမာမှာနော်။
(ဓာတ်ပုံ ၈၀% ပျက်သွားတယ်ဆိုလို့ နှမြောလိုက်တာ။)
တွေးခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေးလေးတစ်ခုပါ..။ မချော ချစ်တဲ့ ဧရာဝတီအတွက်ပေါ့နော်..။
သူ့ အနားသတ်မှာတစ်ခါက ကျွန်တော်တို့
ပျောက်ပျက်သွားတဲ့ သဘာဝတွေ ရှိတယ်
ဖျောက်ဖျက် ခံရတော့မယ် သဘာဝတွေရှိတယ်...။
သူ့ ရင်ခွင်ကို စုန် ဆန်
ကူးချီသန်းချီ ၀မ်းစာရှာသူတွေ ရှိတယ်
သူ့ ရင်ခွင်ကို ကန့်လန့်တိုက်
ဟို ဒီ ကမ်းနှစ်ဖက် လူးလွန့် ၀မ်းစာရှာသူတွေ ရှိတယ်
သူ့ သဘာဝကို ဖျက်ဆီး
လက်တစ်လုံးခြား စီးပွားရှာသူတွေလည်း ရှိတယ်....။
သူ ပြတာက စုန် ဆန် ရ တရားလား
မတည်မမြဲ သဘာဝ တရားလား
ရိုးသားကြိုးစား လူ့ အားမာန်တွေလား
ကျနော်လည်း ဧရာဝတီ ကမ်းနဖူးက မြို့တွေကို ရောက်တိုင်း မြစ်ကို သွား,သွား ကြည့်တတ်တယ်၊ မချောရဲ့ ဧရာဝတီ ဓါတ်ပုံတွေ လှတယ်၊ ရာဇဝင်ထဲက သတို့သမီးကို လာမယ့်အနာဂါတ် ကာလများစွာမှာပါ ဆက်လက်ပြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနား စေချင်ပါတယ်ဗျာ...။
"မြစ်ဧရာ ကြော မှာလ..စုန်ဆန် ကာ မျောပါလို့..." ဆို့ တဲ့ သီချင်းကဗျာ ကလေး နဲ့ အိပ်ခဲ့တယ်။ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်း နဘေးက မြို့လေးမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ ပတ်သက်သမျှ.. ရွက်လှေကြီးတွေ၊ မြစ်ကျဉ်း တွေ အကြောင်း ၊ နာမည်ကျော် ၀ဲ ကြီးတွေ၊ လျှို့ဝှက်တဲ့ ကြောက်စရာငရွေး ကြီးတွေ၊ လူကို ကယ်တယ် ဆိုတဲ့ ဘုရားငါး ကြီးတွေ၊ လူနဲ့အတူ ငါးဖမ်းပေးတဲ့ လင်းပိုင်တွေ၊ ပျောက်ကွယ် သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီ မိကျောင်းကြီးတွေ အကြောင်း..ဧရာဝတီမြစ်ကြီး နဲ့ ပတ်သက်သမျှ အကြောင်းအရာ တွေ ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာသူ ပါ။ မြစ်မင်းဧရာဝတီ ထာဝရ တည်တံ့ ပါစေ။
ချောရေ 'ချစ်သောဧရာဝတီ' ပို့စ်ကိုဖတ်ရပြီး ပုံတွေကိုမြင်ရတော့ ပေါ်လာတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုက မေခနဲ့မေလိခမြစ်နှစ်သွယ်ဆုံတဲ့နေရာကို ရောက်ဖူးချင်တယ်။ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါကွယ်။
ဧရာတီ မြစ်ကြီးတစ်ခုတည်းကို မှီခိုကာလေ လုပ်ကိုင်ကာစားတဲ့ မြေပြန့်တောင်ပေါ် မခွဲခြားနဲ့ ညီအစ်ကိုပါ...
ဘယ်တော့မှ မေ့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ...၊၂ခါလားပဲ ၂
ဒီလို ရှုခင်းလေးတွေက မျက်စိ ပသာဒ ဖြစ်စေသလို စိတ်နှလုံးကိုလဲ အေးချမ်းစေပါတယ်။ ရောက်ခဲ့ဖူးသားမို့ ဓါတ်ပုံထဲ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် မြင်တွေ့လိုက်ရတော့ ပိုပြီး လွမ်းမောမိသလိုလို။
ဘယ်တော့ကြည့်ကြည့် မရိုးနိူင်အောင် ချစ်ရတဲ့ ဧရာဝတီပါ...ချောရေ....:)
ဧရာဝတီ ရဲ့ အလှက အတော် ယစ်မူးချင်စရာကောင်းတာပဲ သဘာဝတရားတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်းနေတာ .။
ချစ်သော ဧရာဝတီကို ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့် လှပခဲ့တယ်၊ လှပနေဆဲ၊ လှပနေဦးမှာပါ ချောရယ်။ ဘုန်းဘုန်းတော့ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးဘူး။ ချောပြောတာနဲ့ပဲ သွားချင်စိတ်၊ မြင်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်နေမိပြီ။ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ အမှိုက်စွန့်ပစ်တတ်ကြတာတော့ တော်တော်ဆိုးတဲ့ အကျင့်စရိုက်ပဲ။ သိလား။
(ချောရေ ဘုန်းဘုန်း အိန္ဒိယပြန်ရောက်ပြီနော်။ အခု ညနေကမှ ပြန်ရောက်တာ Air Asia နဲ့။ အို မဆီမဆိုင်နော် ချော၊ မပြောဘဲလည်း မနေနိုင်လို့။ ဟိ။ )
ကျန်းမာပျော်ရွှင် ကြည်လင်ဝင်း အေးမြပါစေ...
ကျေးဇူးပါချောရေ။ သိပ်တန်ဘိုးရှိတဲ့ပုံတွေပါ။ မြစ်တလျှောက် ဗန်းမော်ထိ ကားနဲ့ ၊ မော်တော် နဲ့ ၊ ခြေလျင်နဲ့wetland survey လုပ်ခဲ့ဘူးလို့ သူ့ ကို သိပ်တန်ဖုိုးထားပါတယ်။ ချစ်လည်းချစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းခံနေရတဲ့အတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ နှလုံးသွေးကြောကြီးကို မညစ်နွမ်း မခန်းခြောက်စေဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အသိတရားရှိရှိ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေချင်တယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ကြီး လှပရှင်သန်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းနေပါတယ် မချောရေ ...
ငယ်ငယ်က ညနေတိုင်း မြစ်ဆိပ်မှာ ရေသွားကူးတယ်
လွမ်းလိုက်တာ :( ပုံလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ
ဧရာဝတီရဲ့ အနာဂတ်ကတော့ ရတက်မအေးစရာပဲ အစ်မရေ.... ပညာရှင်တွေနဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီး အမြန်ဆုံးကယ်တင်မှ တန်ရာကျမယ်...
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက... တကယ့်ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြောတစ်ခုလိုပါပဲ။
အမြဲ ဆက်လက်စီးဆင်း လှပနေနိုင်ပါစေ..။
မချော ရေးထားပုံလေးက ဧရာဝတီကို မြင်သာထင်သာရှိလိုက်တာ။
လှသော ဧရာဝတီကြီးကိုလာကြည့်ပါတယ် မချောရေ
Wishing our bride Irrawaddy.....long live,healthy,carrying green n wealth along her bank....
Thanks for your photoes.
မချောရေ. ချစ်သော ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သဘာဝ အရင်းအမြစ်ကြီး ဖြစ်သလို ကျွန်တော်တို့ မိသားစု အတွက်လည်း အရေးကြီးတဲ့ ကျေးဇူးရှင် သဘာဝအရင်းအမြစ်ကြီးပါဗျာ။ ဒီ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ မိခင် ဧရာဝတီ မြစ်ကြီး ကော မသွားဖို့ ကျွန်တောတို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့... တစ်ချို့သော လူတွေရဲ့ လောဘ၊ မောဟ ၊နဲ့ အတ္တတွေကြောင့် ဒီမြစ်ကြီး တိန်ကော သွားမှာကိုတော့ စိုးရိမ်မိပါရဲ့ဗျာ...
ကမ္ဘာတည်နေသရွေ့ ဧရာဝတီတည်နေပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် မမရယ်....း(